हाम्रो गाउ : प्यारो रत्नेचौर | रत्न झै सुन्दर प्यारो रत्नेचौरका लागि केही गर्ने साझा प्रयास | Page 4
एकता समूहले दशैं विशेष कार्यक्रम गर्ने
कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको ब्यानर
रत्नेचौर/अर्जम म्याग्दीमा स्थापित एकता अर्जम साँस्कृतीक समुह ले हरेक बर्ष जस्तै २०६९ सालको शुभ बिजया दशमीको पावन अवसरमा यहि कर्तिक ८,९ र १० गते वृहत साँस्कृतीक कार्यक्रम तथा एकल नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। संस्थाको पाँचौ बार्षिकोत्सवका अबसरमा गर्न लागिएको ”वृहत साँस्कृतीक कार्यक्रम तथा एकल नित्य प्रतियोगिता” सञ्चालनार्थ सहयोग अभियान सुरु गरिएको छ। एकता अर्जम साँस्कृतीक समुहका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र थापा मगरको संयोजकत्वमा सहयोग अभियान सञ्चालन सुरु गरिएको सँस्थाका अध्यक्ष खकेन्द्र थापा मगरले बताउनु भएको छ। म्याग्दी जिल्ला रत्नेचौर गाबीस, अर्जममा आयोजना गरिने ३ दिने कार्यक्रममा विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम, साङ्गितिक कार्यक्रम, एकल नित्य प्रतियोगिता, एस एल सी उतिर्ण बिधार्थीहरुलाई सम्मान, पोखरेली कलाकारहरु को बिषेश प्रस्तुती, म्याग्दी जिल्लाबाट बिषेश पहिचान बनाउन सफल राष्टिय कलाकारहरु लाई सम्मान, राष्टिय तथा स्थानिय लोकदोहोरी गायक गायिकाहरुको प्रस्तुति तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम रहनेकुरा अध्यक्ष खगेन्द्र थापा मगरले बताउनु भएको छ।
बिषेश गरेर बैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका सँस्थाका सहयोगदाता एवम् शुभचिन्तकहरुलाई लक्षित गरेर ”सहयोग अभियान” कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। साथै कार्यक्रमको लागि प्रायोजक, प्रबन्धक, ब्यानर प्रायोजक, मिडिया पार्टनर, पुरस्कार प्रायोजक, बिज्ञापनदाता साथै प्रचार प्रसार को लागि लिला थापामरगर, राजु थापामगर र खगेन्द्र थापामगरको संयोजकत्वमा कार्यक्रम तिब्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ। सहयोगदाताहरुको सहयोग बिबरण एकता अर्जम साँस्कृतीक समुह को अफिसियल फेसबुक पेजमा अपडेट गरिनेछ। बिगतमा लिसाँर कला केन्द्र सञ्चालन गर्नु्भएका तथा हाल दिपज्योति कलाँ केन्द्र पोखरामा क्रियाशील दिलिप रानामगर को प्रशिक्षणमा संस्थाका कलाकारहरुले बिबिध प्रस्तुतीहरु जस्तै सालैजो, मारुनि, कौडा, तामाङ सेलो, चुड्का, कर्पु तारे झ्याउरे, काशीकाँधे झ्याउरे, पैसाझारे मारुनी जस्ता लोपउन्मुख नृत्यहरु तथा मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतीहरु प्रस्तुत गर्नेछन् ।
Posted in पूर्वी नेपाल, Udaypur	| Leaveareply
मनसुन लागेन रत्नेचौरमा
मनसुन शुरू भएको दुर्इहप्ता बितिसक्दा पनि रत्नेचौरमा खास वर्षा हुन सकेको छैन । पहिलेका बर्षहरूमा मध्य असारदेखि रोपाइँको काम शुरू हुने गरेको भएपनि आजसम्म गाउँमा कसैले हल नारेका छैनन् । मकै बाली अपेक्षित समयमा फल्न नसकेको र लामोसमयदेखि खडेरीको चपेटामा परेकाले धानको बिउँ उम्रन नसक्नुले रोपाइँको काम शुरू हुन नसकेको किसानहरूले बताए ।
असारको दोश्रो हप्ता शुरू हुनेबेलामा फाट्टफुट्ट पानी पर्न शुरू गरेपनि रोपाइँको काम हुने गरी वर्षा भएको छैन । रत्नेचौर ३ का कृषक लाल थापाका अनुसार अहिले गाउँमा कोदो रोप्ने काम शुरू भएको छ । सम्भवतः असारको अन्तिम वा साउनको पहिलो हप्तापछि मात्र रोपाइँको काम शुरू हुनेछ ।
Posted in गाउँको खबर	| Tagged असार, खेतीपाती, रत्नेचौर	| Leaveareply
गाईघाटमा मेरा साँझहरू
श्रमीक पार्कमा रहेको स्रष्टा स्मारक । तस्बीरः नीराजन शिरीष
गाईघाट बजारमा शुरुमा पाइला राख्दा लागेको थियो, यो नगरमा मानिसहरुको उती चाप रहेनछ । तर तरकारी बजारतिर साँझतिर डुल्दै जाने काम थालेपछि मेरो पूर्वानुमानले नराम्ररी फेल खायो जसरी हाम्रो मौसम बिभागको पूर्वानुमान शाखाले आज मौसम सफा रहन्छ भनेको दिनमा झमझम पानी पर्दछ ! गाईघाट बजारबाट पूर्वतिर बरुवाको बगर जाने बाटोमा प्रत्येक साँझ लम्वेतान भिड हुन्छ मान्छेहरुको । यहाँ मानिसहरु आफ्ना उत्पादनहरु लिएर प्रत्येक साँझ सडकको दुई किनारमा ब्यवसाय चलाएर बसिहेका हुन्छन । ब्यवसायका लागि सयौं बस्तुहरु सडकमा बिछ्याइएका हुन्छन – तरकारी देखि जिरामसलासम्म, काष्ठकला देखि अरु धातुका बस्तुहरू ! र , अचम्म लाग्दो कुरो त प्रत्येक ब्यापारीहरुकहाँ मानिसहरुको उत्तिकै चाप देखिन्छ । मानिसहरुको बार्गेनिङ चलिरहेको हुन्छ । जस्तो ३० रुपैया केजी भन्टा छ भने ग्राहक १ रुपैया नै कम सही २९ रु. मा किन्न चाहन्छ । र, यो खरिद – बिक्रीको श्रृङ्खला झमक्कै साँझ नपरुन्जेल चलिरहन्छ अनवरत ।
मलाई तरकारी किन्नु पर्दैन । यसको मतलब तरकारी नै खाँदिन मैले हैन । होटलमा खानाखाने बन्दोबस्ती गरेपछि खरिदबिक्रीको झण्झटबाट मुक्ति मिल्ने हुनाले म यो तरकारी बजारमा आफ्ना केहि साथीहरुसँग मिलेर घुम्न जाने मात्र गर्छु । र, मानिसहरुको भीडमा हराइरहेको पाउँछु आफूलाई । प्रत्येक साँझ घाम डुबेपछि गाईघाटको मौसम अलिकति चिसो हुन्छ – विशेष गरी त्यही तरकारीबजारको छेउछाउ । दिनभरको उखरमाउलो गर्मीलाई बिर्सन भएपनि साँझतिर घुम्नु जरुरी हुन्छ यतातिर । मानिसहरु मध्यरातसम्म झुण्डझुण्ड बनाएर साँझको हावा खान सडकमा असरल्लै पोखिएका हुन्छन ।
तरकारी बजारतिर घुम्न जाँदा सबभन्दा बेफाइदाको कुरा यहाँ हुने मानिसहरुको भीडलाई छिचोल्नु नै हो । मानिसहरु अत्यन्तै अस्तब्यस्त ढंगमा यता उता गरिरहेका हुन्छन् । मान्छेहरुसँग ठोक्किदै, ठेलिदै बाटो पार गर्नुपर्छ । त्यसकारण अलिक लामै समय भयो म त्यतातिर घुम्न निस्केको छैन । त्यसकारण, त्यसपछि मेरो साँझपख टहल्ने गन्तब्य बन्यो – श्रमीक पार्क । दिनभर यहाँ मानिसहरुका लागि प्रवेश निषेध गरिएको छ । बिहान र साँझपख केहि घण्टा मात्र खोलिने यो पार्क मजदुरहरुको सम्मानमा बनाइएको हुनुपर्छ । किनकी, पार्कभित्र मानिसहरुले श्रम गर्दैगर्दाका केहि मूर्तिहरु ठड्याइएका छन् । ती बडो कलात्मक छन् । कृषि वा परम्परागत श्रमलाई निकृष्ट कामका रुपमा हेर्ने अचेलका युवाहरु पनि यी मूर्तिहरु देखेपछि साँच्चिकै श्रमप्रेमी हुन्छन भन्ने मेरो विश्वास छ । यी अत्यन्तै आकर्षक ढंगले कुँदिएका छन् । तथापि श्रमीक पार्कमा पनि एकाध आधुनिक प्रेमीहरुको उत्ताउलो प्रेमप्रदर्शनले अरु एक्लै वा समूहमा त्यहाँ घुम्न निस्किनेहरुलाई बडो अप्ठ्यारोमा पार्दछ । हुन पनि अचेल प्रेमी/प्रेमिका भेटिँदासाथ आलिङ्गनमा बेरिनु र चुम्बनको वर्षा गर्नु उति अस्वभाविक विषय पनि रहेन । परन्तु, हामी एउटा अत्यन्तै बन्द संस्कृतिबाट गुज्रिरहेका हामीहरुलाई उनीहरुका क्रियाकलापहरुले केहि अप्ठ्यारोमा पार्दो रहेछ ! अझ कहिले काही त यी दृश्यहरु हेर्दै गर्दा रोमाञ्चक कुरा दिमागमा खेल्न शुरु गर्दछ – काश, म पनि उनीहरु झैं किशोर भैदिएको भए ? घरब्यवहार, समाज, संस्कृति एउटा कुनामा थन्काएर म पनि प्रेमको उत्कृष्ट आनन्द भोग गरिहेको हुन्थेँ सायद !
श्रमीक पार्क पछि मेरो साँझपख टहल्ने गन्तब्य बन्यो – म बस्ने स्थानबाट सिधैं उत्तरतिर । अर्थात करमगाछी साइड । यो अलि विशेष गन्तब्य पनि हो । गाईघाटमा जस्तो सवारीहरुको चाप नहुने भएकाले पनि यहाँका लब्धप्रतिष्ठित मानिसहरुको रोजाइ बनेको छ यो ठाउँ । हावाको सिरसिरे झोक्का चलिरहन्छ यो ठाउँमा । त्यसैले अचेल म यतातिर बरालिन थालेको छु । म बस्नेतिरका साथीहरु उति घुमन्ते छैनन् । यही एउटा कुरा बिझाउँछ मनमा । कि एक्लैएक्लै डुल्नु पर्छ । भोला एउटा साथि छन् नजिकै तर उनको रोजाई लभ्ली डाँडा ! भन्छन् – केटाकेटीहरुको प्रेमलाई अनुभव गर्न पाइन्छ नजिकैबाट । म प्रेमदेखि वाक्क परेको मान्छे, तरकारी बजारदेखि श्रमीक पार्क हुँदै करमगाछीतिर बरालिन आईपुगेको छु । मेरो खोजी हो – एकदम शान्त र एकलाँस तर सुन्दर गन्तब्य ! बरु त्यो ७ कि.मी पर रहेको चुहाडेको जंगललाई गाईघाटको छेवैमा ल्याउन मिल्ने भएपनि त हुन्थ्यो नि !
Posted in पूर्वी नेपाल, Udaypur	| 1 Reply
स्लो बाइकमा महतको पकड
बिजेता बसन्त महत
अघिपछि अलि गतिमै बाइक हाँक्ने रत्नेचौर २ का बसन्त महतले हिजो आषाढ ६ गते भने अत्यन्तै ढिलो गतिमा बाइक हाँकेर जिल्लामा आयोजित ‘स्लो बाइक रेस’ मा प्रथम स्थान हासिल गरी नगद रू ५ हजार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । जेसिस म्याग्दीले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितमा ३४ जना अरू प्रतिस्पर्धीहरूलार्इ पाखा लगाउँदै महतले शिर्षस्थान हासिल गर्न सफल भएका हुन ।
६० मिटरको दुरी निर्धारण गरी सवै भन्दा ढिलो बाईक हाँक्नेले जित हात पारेका हुन् । बाईक स्टार्ट गरेपछी बन्द गर्न नपाईने, निर्धारित सिमाभन्दा बाहिर जान नपाईने र भुइमा खुट्टाले टेक्न नपाईने जस्ता नियमहरुलाई पालना गर्दै महतले २ मिनेट ३० सेकेन्डमा उक्त दुरी पारेका थिए । उनीभन्दा २३ सेकेण्ड अगाडि उक्त दुरी पार गर्ने अर्का एक जना प्रतियोगि स्पर्धामा द्भितीय भएका थिए ।
रत्नपुत्र महतको यस सफलताका लागि हाम्रो ब्लगका तर्फबाट हार्दिक बधार्इ तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ ।